Zahao ity Fifaninanana ity: Makà iMac avy amin'ny DevDad! | Martech Zone
Zahao ity Fifaninanana ity: Makà iMac avy amin'ny DevDad!
Zoma, Oktobra 19, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay no nandinihako bebe kokoa ny isan'ny fifaninanana sy ny hatsaran'izy ireo, indrindra satria efa ho tonga ny fanomezana $ 1,000 (ahy fotsiny, mila mpanohana vitsivitsy hafa!).
Androany alina aho no tany ampitan'ny Mijanona ao an-trano Dada iMac Give-Away. Vita soa aman-tsara ity fifaninanana ity. Izy io dia manana loka mahafinaritra, sary mahafinaritra, ary lisitr'ireo takiana amin'ny antsipiriany mba hidirana amin'ilay fifaninanana - samy mampiroborobo ny bilaogy sy ny mpanohana. Mike dia nametraka fonosana tsara - 20 ″ Apple iMac vaovao. Izy io dia manana processeur 2.0 GHz Intel Core 2 Duo, fahatsiarovana 1 GB, kapila mafy 250 GB, 8x SuperDrive, ary fampiratiana glossy 20 ′. Izy io dia miaraka amin'ny totozy sy kitendry ary lafo $ 1199.
Tena tsara fa hanoratra lahatsoratra eo aho ary midira amin'ny fifaninanana!
Ny momba an'i Mike aloha - ilay bilaogera ao aoriany DevDad, amin'ny teniny manokana:
Mike no anarako. Izaho no feo ao aoriako DevDad.com. Izaho dia 21 taona mpamorona tranonkala sy manam-pahaizana momba ny SEO avy any Tampa Bay, Florida. Tiako ny mitoraka bilaogy, ary tsapako tato ho ato fa ny asa rehetra soratako dia ny asa, fa ny tena tiako soratana momba izany dia izay mitranga ao an-trano mandritra ny andro. Apetrako amin'ny Internet ity fomba ity ho toy ny fomba hanoratako ny fiainako amin'ny maha-ray any an-trano ahy, amin'ny maha-tompona orinasa vaovao ahy, ary amin'ny maha-bandy ahy izay mitady ny fomba hanaovana juggle betsaka kokoa noho ny nahazatra azy. Manantena aho fa hifikitra ianao hahita ny fandrosoan'ny raharaha!
Mike dia manana layout tsara amin'ny tranokalany, tiako ny loko, ny sary, ary indrindra ny sarin'ny zanany vavy tsara tarehy. Aza hadino izany jereo kely! Vao nanomboka ny BlogHelper.org i Mike! Misy famakiana tsara eto amin'ity tranokala ity raha te-hamaky manokana momba ny fitorahana bilaogy ianao!
Mikasika ny SitterCity, ny tanjon'izy ireo dia ny mampifandray ireo ray aman-dreny amin'ireo mpikarakara ao amin'ny faritra misy azy ireo. Misy lafiny roa ny tranokala… ny olona mitady ny fipetrahana ary ireo mipetrapetraka izay mety mitady asa! Raha miahiahy momba ny fiarovana ianao, ny tranonkala dia afaka manampy fanamarinana ambadika mampiasa LexisNexis amin'ny $ 9.99 mora vidy.
Ka eo ianao no manana azy, tranokala 3 tsara amin'ny lahatsoratra tokana!
Tags: Joe Pulizzibara hafatratsoratadidy sosialyanjan'nybara ambonyplugin WordPress
Ahoana ny fomba fihinanana Pretzel gourmet?
Miaina, mitia, mihomehy